Somali - #weexplainforeveryone
Talaalada guud ahaan
1. Waa maxay tallaalku?
Tallaal siinta dadka si looga ilaaliyo cudurrada faafa waxaa loo yaqaan tallaal. Cudurada qaarkood waa in si joogto ah loo tallaalaa si looga hortago (tusaale ahaan teetanada). Hal ama laba tallaal ayaa ku filan cudurada kale (sida cudurka dabaysha ). Hal ama laba tallaal ayaa ku filan cudurrada kale (tusaale, jadeecada).
2.	Sidey talaalku u shaqeeyaa?
Tallaalku wuxuu dhaqaajiyaa difaaca jirka. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa habka difaaca jirka. Tallaalku wuxuu ku dhaliyaa habka difaaca jirka inuu soo saaro walxo u gaar ah si looga hortago cudurrada. Maaddooyinkaas waxaa loo yaqaannaa difaaca jirka.
3.	Muxuu tallaalku muhim u yahay?
Talaalku wuxuu yareeyaa halista jirrada. Marka fayrasyada, bakteeriyada ama fungi ay galaan jirka, tan waxaa sidoo kale loo yaqaan infakshan. Infekshannada qaarkood waxay xitaa u horseedi karaan dhimasho. Tallaalku wuxuu ka hortagi karaa infekshinnada iyo waxyeellada caafimaadka, oo mararka qaarkood dhacda oo keliya sannado badan ka dib.
Macluumaad guud oo ku saabsan ka hortagga Corona
4.	Tallaaladee looga hortagayaa Corona ayaa laga ansixiyay Jarmalka?
Jarmalka, tallaalada soo saarayaasha BioNTech/Pfizer („Comirnaty“), Moderna („Spikevax“), AstraZeneca („Vaxzevria“) iyo Johnson&Johnson waa la ansixiyay. Vaxzevria lagama tallaalin Jarmalka ilaa Noofambar 2021, Johnson&Johnson sidoo kale hadda lama isticmaalo.
5.	Sidee ayey u shaqeeyaan talaalkan kaladuwan?
Tallaallada oo dhan waxay dhaqaajiyaan habka difaaca jirka, waxa loogu yeero difaaca jirka, si ay isaga difaacdo fayraska. Sidaa darteed jirku wuxuu soo saaraa unugyada difaaca jirka ee ka ilaaliya jirka fayraska. Tallaalka, jirka “wuxuu ku bartaa” sida loo difaaco.
6.	Sidee tallaalada ugu kala duwan yihiin waxtarkooda?
Talaalada oo dhan waxay si fiican uga ilaaliyaan inaad si daran ugu bukooto cudurka loo yaqaan ‚Covid-19‘ ama xitaa u dhimato. Marka loo eego heerka aqoonta ee imika, ma jiraan faraqyo cad oo ku saabsan waxtarka tallaalada. Waa hubaal in dhammaan tallaallada ay si fiican u ilaashadaan tallaalka ugu horreeya ka dib iyo si aad u fiican kadib tallaalka labaad.
7.	Yaa lagu tallaalayaa tallaalkee?
Qof kasta oo aan weli laga tallaalin Covid-19 waa in laba jeer lagu tallaalaa dhowr toddobaad gudahood iyadoo la siinayo tallaalka mRNA ee BioNTech/Pfizer (BioNTech) ama Moderna (Spikevax).
Jarmalka, badi dadka da’doodu u dhaxayso 12 iyo 30 ayaa tallaalka ka qaata BioNTech/Pfizer. BioNTech hadda waxaa sidoo kale loo oggolaaday Midowga Yurub carruurta ay da’doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 jir, kuwaas oo qaata tallaalka carruurta ee gaarka ah oo leh qiyaas tallaal oo ka hooseeya.
Moderna’s Spikevax hadda waxaa loo oggolaaday isticmaalka dadka ka weyn da’da 18.
Tallaalka Vaxzevria ee shirkadda AstraZeneca ayaa sidoo kale la ansixiyay laga bilaabo da’da 18. Tallaalkan laguma isticmaalin Jarmalka ilaa dhammaadka Noofambar 2021.
Tallaalka ka yimid Johnson & Johnson sidoo kale waa la ansixiyay laga bilaabo da’da 18, sababtoo ah saameyntiisa tallaalka oo hooseeya, tallaalkan hadda kama jiro ama si dhib leh waligiis looga tallaalay Jarmalka. Qof kasta oo hal tallaal ka helay Johnson & Johnson waa inuu si dhab ah u qaataa tallaal labaad oo tallaalka mRNA ah (Spikevax ama BioNTech) laga bilaabo 4 toddobaad kaddib tallaalka si loo helo tallaal wanaagsan. Marka loo eego aqoonta sayniska ee hadda, hal tallaal oo tallaalka Johnson&Johnson ma bixiyo ilaalin tallaal ku filan.
8.	Ma dooran karaa tallaalka aan ku tallaalayo??
Jawaabta tallaalka waa calaamad wanaagsan. Waxay muujineysaa in talaalku shaqeynayo oo jirka uu bilaabayo inuu isdifaaco.
Dhibaatooyinka soo raaca ma fiicna oo sidoo kale khatar bay keeni karaan. Laakiin iyaguna aad ayey u yar yihiin. Waxyeellada caadiga ah laakiin dhifka ah waa, tusaale ahaan, fal-celin xasaasiyadeed oo tallaalka ah.
Tusaale ahaan, haddii aad qandho yeelato tallaalka ka dib oo qandhadu aysan sii socon 3 maalmood kadib, waa inaad la tashataa dhakhtar. Xitaa haddii madax xanuun daran uu ku dhaco tallaalka ka dib tallaalka Vaxzevria ee ka socda AstraZeneca oo uu sii socdo dhowr maalmood, dhakhtar waa in si dhakhso leh loola tashadaa.
Maxaa dhacaya isla marka tallaalka ka dib?
9.	Maxaa ku dhacaya jidhkayga tallaalka ka dib?
Jidhku wuxuu falceliyaa tallaalka wuxuuna sameeyaa unugyada difaaca jirka. Sidaa darteed, mararka qaarkood waxaa jira falcelinno jir oo aad adiguba dareemi karto oo aan fiicnayn. Caadi ahaan falcelintan ku saabsan tallaalka way fududahay waxayna tagtaa dhawr maalmood ka dib. Dareen-celinta suuragalka ah ee tallaalku waa: xanuun iyo danqasho goobta duritaanka ah, maqaarka cas ama barar. Daal, madax xanuun, qandho, dhaxan, lallabbo, iyo muruq xanuun ayaa sidoo kale dhici kara.
10.	Maxay dadka qaarkii u dareemaan xanuun tallalka kadib?
Jidhkeennu dhammaantood way kala duwan yihiin. Taasi waa sababta jidhkeenu u falceliyo si ka duwan. Dadka qaarkiis sidaa darteed waxay dareemayaan falcelinta tallaalka si aad u xoog badan, qaar badan oo daciif ah qaarna xitaa ma wada laha.
11.	Waa maxay farqiga u dhexeeya falcelinta tallaalka iyo waxyeelloyinka so raaca?
12.	Waa maxay falcelinta tallaal ee jira?
Dareen-celinta suuragalka ah ee tallaalku waa: xanuun iyo danqasho goobta duritaanka ah, maqaarka cas ama barar. Daal, madax xanuun, qandho, dhaxan, lallabbo, iyo muruq xanuun ayaa sidoo kale dhici kara.
13.	Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca?
Dhammaan dhibaatooyinka soo raaca aad bay dhif u yihiin! Dhammaan tallaalada, tusaale ahaan, mararka qaarkood waxay keenaan dareen-celin xasaasiyadeed. Tallaalada laga helay AstraZeneca iyo Johnson&Johnson, waxaa jiray xaalado aad u yar oo xinjiro dhiig ah. Kiisaska aad dhif u ah ee myocarditis fudud ayaa lagu arkay Moderna’s Spikevax iyo BioNTech/Pfizer’s Comirnaty. Sababtoo ah tani waxay dhacdaa inta badan, haddii dhammaan, dadka da’doodu ka yar tahay 30, dhalinyaradan waa in la siiyaa tallaalka BioNTech/Pfizer’s Comirnaty, taas oo xitaa ay u badan tahay in ay saameyn ku yeelato tallaalka Moderna’s Spikevax.
14.	Intee in le’eg ayaa la iga ilaaliyaa tallaalka koowaad iyo labaad?
Tan hadda waxaa lagu barayaa si dhaawac. Sidaa darteed, weli ma jiro xog gebi root la isku halleyn diamonds. Xilligan, tallaalkii ugu horreeyay wuxuu horeba u difaac wanaagsan oo aad u wanaagsan oo looga hortagayo halis ah ama dhimasho ah Si kastaba ha ahaatee, tani waxay socotaa oo keliya dhowr hore ama bilo, markaas tallaalka labaad waa in marawalba la laga (marka la) lagata reebo Johnson & Johnson, meesha tallaal oo keliya looga baahan yahay). Tallaalka ugu, waxaad hore uheli doontaa taariikhda tallaalka labaad.
15.	Intee in le’eg ayaa i ilaalin doona tallaalka buuxa iyo waa maxay tallaalka „xoojinta“?
Khubarada ayaa hadda sheegaya in ilaalinta tallaalka dib loo cusboonaysiiyo („kor loo qaado“) haddii ay suurtagal tahay lix bilood ka dib tallaalka labaad, sababtoo ah ilaalinta tallaalka ayaa si weyn hoos ugu dhacda qiyaastii 6 bilood ka dib. Tani waxay saamaysaa dadka oo dhan.
Waxay la mid tahay tallaallada kale. Tusaale ahaan, tallaalka hargabka (hargabka) waa in la bixiyaa hal mar sannadkii, iyo tallaalka teetanada (qufulka) waa in la cusboonaysiiyaa 10kii sanoba mar.
16.	Da´daydu ma saamayn ku yelaata waxtarka tallaalka?
Haa. Da’da sii kordheysa, habka difaaca jirka ayaa sidoo kale daciifa. Marka loo eego aqoonta hadda jirta ee ku saabsan tallaalka, waxaa jira difaac ku filan xitaa da’da weyn iyada oo loo marayo tallaallada lagu oggolaaday Midowga Yurub.
17.	Ma gudbin karaa fayraska inkasta oo la i tallaalo?
Haa. Gudbintu waa suurtagal xitaa haddii suurtagalnimadu aad uga yar tahay. Marka loo eego heerka aqoonta ee hadda, si kastaba ha noqotee, habka cudurka ee dadka la tallaalay guud ahaan waa sahlan yahay.
18.	Ma iska tallaali karaa markan Corna haystey iyo hadertan ka caafimaadey?
Haa, laakiin kiiskan tallaalka ayaa lagu talinayaa kaliya saddex bilood ka dib baaritaanka PCR ee togan (cunaha dhuuban) si loo kiciyo samaynta difaaca difaaca ee wali jira ee ka hortagga fayraska. Haddii unugyada ka-hortagga COVID-19 lagu ogaado baarista dhiigga, tallaalka waxaa la bixin karaa ugu horreyn 4 toddobaad kaddib baaritaanka dhiigga.
Qof kasta oo ku dhaca Corona inta u dhaxaysa labada tallaal ee hore waa inuu sidoo kale u hoggaansamaa muddada aan kor ku soo sheegnay, waxaana hadda lagula talinayaa tallaallo xoojin ah.
19.	Miya tahay inaan wali xirto masskada wajiga ka dib tallaalka oo aan raaco xeerarka nadaafadda?
Haa. Xeerarka hadda ee anshaxa xaaladda musiibada ayaa sii socota in lagu dabaqo. Corona weli waa la is qaadsiin karaa tallaalka ka dib. Xeerarka nabadgelyada ayaa markaa sii wadaya inay ku shaqeeyaan.
20.	Waa maxay faa´ iidooyinka tallaalku?
Waxaa lagaa ilaaliyaa dariiqa daran ee dilaaga ah ee cudurka coronavirus.
Tallaalku wuxuu ka dhigaa infekshan ku dhaca fayraska loo yaqaan ‚corona virus‘ mid aad u yar.
Aad ayey ugu yar tahay inaad adigu qof kale ku qaadsiiso fayraska corona.
Marka laga reebo faa’iidooyinka caafimaadka, waxaad ku raaxeysan kartaa waxqabadyo badan oo madadaalo ah oo aan suuragal ahayn haddii aan la tallaalin. Waad ku laaban kartaa makhaayadaha, waxaad la kulmi kartaa asxaabta, waxaadna heli kartaa waqti badan oo firaaqo ah oo wata caddeyn tallaal.
Noocyo kala duwan oo lagula tacaalayo cudurka faafa ayaa caan noqday, moodooyinka maanta la isticmaalo waxaa lagu magacaabaa 3G, 2G iyo 2G+.
3G macneheedu waa: Helitaanka waxay suurtogal u tahay oo keliya dadka la tallaalay, ka bogsaday ama laga helay diidmo (baaritaan degdeg ah/baaritaan antigen ama PCR) maalinta booqashada.
2G macneheedu waa: Helitaanka waxay suurtogal u tahay kaliya dadka la tallaalay ama la soo kabsaday.
2G+ macneheedu waa: Helitaanka waxay suurtogal u tahay kaliya dadka la tallaalay ama la soo kabsaday haddii ay sidoo kale muujin karaan baaritaanka xun ee hadda (baaritaan degdeg ah/baaritaanka antigen ama PCR) maalinta booqashada.
Waa maxay khataraha?
21.	Ma jiraan dad leh halista ugu badan ee infekshinka kuwa kale marka la u firio?
Dadka da’da ah iyo kuwa jiranba waxay leeyihiin khatar aad u sareysa oo ah inay si daran u jiran yihiin ama ay u dhintaan Covid 19. Dadka xiriir badan la leh dadka kale waxay halis weyn ugu jiraan infekshin. Kuwaas waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, dadka guryaha wadaagga ah, booliska ama macallimiinta.
22.	Maxay tahay sababta dadka ku jira hoyga la wadaago ay khatar gaar ah ugu leeyihiin inay qaadaan cudurka?
Dadka ku jira hoyga wadajirka ah waxay leeyihiin khatar sare oo ah inay qaadaan fayraska corona sababtoo ah dad badan ayaa ku wada nool meel yar. Tani waxay aad u adkeyneysaa inaad fogaato. Khatarta infekshanku way korodhaa. Taasi waa sababta tallaalku aad muhiim ugu yahay.
23.	Talaalada miyaa lagu baaranya qaxootiga?
Maya! Talaalka waxa lagu tijaabiyay tabaruceyaal wakhti dheer ka hor. Dhanka kale, in ka badan 8.5 bilyan qiyaasood oo tallaal ah (laga bilaabo Disembar 2021) ayaa laga tallaalay adduunka oo dhan. Tani waxay la macno tahay in kala badh ama in ka badan kala badh dadka adduunka oo dhan laga filan karo in si wanaagsan looga tallaalo COVID-19.
24.	Ma la is tallali karaa haddi aan cudur hore qabo?
Haa. Waa in lagaa tallaalaa, gaar ahaan haddii aad cudurro hore qabtay, maadaama khatarta aad u leedahay dariiqa daran ee COVID uu kugu soo kordhay. Dadka qaba cudurro horey u jirey ayaa markaa ahaa kuwii ugu horreeyey ee laga tallaalo Jarmalka.
25.	Ma la tallaali karaa haddi aan uur leeyahay?
STIKO waxay soo saartaa talobixin talaal ah oo loogu talagalay haweenka uurka leh ee aan la tallaalin laga bilaabo saddexda bilood ee 2aad (saddexda labaad ee uurka, ie. kaliya laga bilaabo bisha 4aad ee uurka) iyo haweenka naaska nuujinaya ee aan la tallaalin.
STIKO waxay ku talinaysaa tallaalka aasaasiga ah laba qiyaasood oo COVID-19 mRNA ah
Isku-dhafka Tallaalka ee BioNTech/Pfizer. Haweenka uurka leh, iyadoon loo eegin da’dooda, waa in lagu tallaalaa Comirnaty oo aan lagu tallaalin Spikevax. Haddii uurka la go’aamiyo ka dib markii tallaalka kowaad uu horay u dhacay, tallaalka labaad waa in la sameeyaa oo keliya laga bilaabo saddexda bilood ee 2aad (ie, laga bilaabo bisha 4aad ee uurka).
26.	Carruurta ma la tallali karaa?
Tallaalka BioNTech ee BioNTech/Pfizer waxa loo oggolaaday carruurta iyo dhallinyarada da’doodu tahay 12 jir. Intaa waxaa dheer, tallaalkan hadda waxaa sidoo kale laga oggolaaday Midowga Yurub carruurta da’doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 jir, kuwaas oo qaata tallaalka carruurta ee gaarka ah oo leh qiyaas tallaal oo yar ka hooseeya.
27.	Yaan la talaalin?
Dadka xanuunka dareemaya oo leh heerkul sarreeya, tusaale ahaan, waa in la tallaalo keliya markay caafimaad qabaan markale (heerkul ah 38.5 ° C ama ka sareeya)
28.	Tallaalku ma wuxuu kaa dhigayaa mid nadiif ah?
Maya. Ma jiro hal daliil oo cilmi ah oo sheegaya in tallaalku yahay mid nadiif ah.
29.	Maxay tallaallaa qaarkood lo joojiyee?
Tallaalka waa loo joojiyay sababta oo ah waxay rabeen inay si faahfaahsan u baaraan dhibaatooyinka ka imaan kara tallaallada qaarkood. Badbaadada dadka oo dhami waa waxa ugu muhiimsan. Taasi waa sababta cilmi baarista loogu sameeyo si sax ah.
Sideen isku tallali karaa?
30.	Ma inaan isdiiwaangaliyo si laygu talaalo ?
Haa Waxa jira habab kala duwan oo la iskaga diwaangelinayo Lower Saxony. Waxaad ballan ka qabsan kartaa xafiiska dhakhtarka tallaalka ama waxaad tagi kartaa ballan la’aan munaasabadda tallaalka wadajirka ah, taas oo inta badan ay bixiyaan kooxaha tallaalka wareega. Waxaad si fiican uga ogaan kartaa internetka halka dhacdooyinkan oo kale lagu bixiyo:
Waxa kale oo jira khadka taleefoonka ee dhammaan dadka ku nool Saxony-hoose ee jecel inay helaan macluumaadka ku saabsan tallaalka fayraska corona.
Waxaad sidoo kale wici kartaa dhaqtarka qoyskaaga ama dhakhaatiirta aagga si toos ah. Dhakhaatiir badan ayaa ka talaala corona ficilkooda. Sida caadiga ah, waa inaad iska diiwaangelisaa halkaas ka hor waxaana jiri doona muddo sugitaan oo dhowr toddobaad ah. Shaqaalaha sooshalka waxay ka caawiyaan isdiiwaangalinta hoyga qaxootiga. Nambarka taleefoonku waa: 0800 99 88 665
Khadka telefoonka waxaa laga heli karaa Isniinta ilaa Sabtida laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo.
Taleefanku waxa uu xidhan yahay maalmaha Axada iyo maalmaha ciidaha.
Bogga internetka ee tallaalka ee Jarmalka:
Macluumaadka dhakhtarka Niedersachsen, waxaad ka raadin kartaa dhakhaatiir ku hadla luqado badan oo kala duwan:
31.	Ma jiraa la-tashi ku saabsan tallaalka?
Tallaalka ka hor, qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay talobixin caafimaad. Tani waxay khuseysaa meel kasta oo aad ka qaadato tallaal, takhtarka qoyska iyo sidoo kale xarunta tallaalka. Su’aalo kasta oo aad hayso waa laga wada hadli doonaa. Haddii aadan weli go’aan ka gaarin tallaalka, waxaad la xiriiri kartaa dhakhtarkaaga guud oo aad weydiisan kartaa la-tashi.
32.	Yaa si sax ah uga talaalaya Jarmalka?
Jarmalka, xarumaha tallaalka waxay sidoo kale ku tallaalaan kooxaha tallaalka wareega, dhakhaatiirta guud iyo kuwa takhasuska leh, dhakhaatiirta shirkadaha iyo dhakhaatiirta gaarka ah.
Gu’ga 2022, dhakhaatiirta ilkaha iyo farmashiistaha waa in sidoo kale loo oggolaadaa inay ka tallaalaan COVID-19.
33.	Maxay yihiin kooxaha talaalka wareega?
Kooxaha talaalka wareega waxay ka tirsan yihiin xarunta tallaalka waana kooxo takhaatiir ah iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo u socdaala, tusaale ahaan, guryaha dadka lagu xanaaneeyo iyo kuwa hawlgabka ah, hoy la wadaago qaxootiga ama meelaha la dego halkaas oo dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin meel xaddidan. Waxay si toos ah goobta ugu tallaalaan xaalado caafimaad. Hadda waxa jira ku dhawaad 200 oo kooxood oo talaalka wareega ah oo ku sugan Lower Saxony.
34.	Xaage ka heli karaa macluumaad dheeri ah?
Macluumaad dheerad ah ayaa laga heli karaa halkan hoos:
35.	Talaalku ikhtiyaari ma yahay?
Asal ahaan haa. Jarmalka, adiga ayaa go’aan ka gaaraya in aad rabto in lagaa tallaalo COVID iyo in kale, haddii aad rabto in aad ka shaqeyso xirfadaha qaarkood, si kastaba ha ahaatee, tallaalku waa qasab. Laga bilaabo Maarso 15, 2022, tani waxay khusaysaa dhammaan dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka ama xarumaha kalkaalinta.
Kuwa aan la tallaalin inta badan waxay haystaan fursado xaddidan oo ay ku dhex guuri karaan nolol maalmeedkooda. Waxaa jira noocyo kala duwan oo lagula tacaalayo cudurka faafa, moodooyinka maanta la isticmaalo waxaa loo yaqaan 3G, 2G iyo 2G+.
36.	Miya lay ciqaabayaa hadaanan rabin talaalka?
Maya Qofna lama ciqaabayo, tallaalku waa ikhtiyaarkis qof walba.
37.	Talaalku miyuu saameyn ku leyhay nidaamka magangalyada?
Maya. Inaad is talaasho iyo inkale lama ciqaabayo wax saameyn ahna kuma lahan nidaamka magangalyada socda.
Komishanka Talaalka Joogtada ah (STIKO) wuxuu horumariyaa talooyinka talaalka ee Jarmalka. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 16 khubaro mutadawiciin ah. Guddigu wuxuu ka shaqeeyaa su’aalaha ku saabsan tallaalka iyo cudurada faafa wuxuuna siiyaa talooyin tallaal.
Telefon: 0511 – 999 873-51
© 2022 #weexplainforeveryone.